Sina mafana amidy Sze namboarina sze miaraka amin'ny vidiny tsara Fold Box Board orinasa sy mpamatsy | PAPER azo antoka
Fivarotana mafana namboarina tamin'ny sze miaraka amina vidin'ny boaty mamoritra boaty
5) Serivisy namboarina amin'ny habe samihafa ho an'ny mpanjifa
1) Haja mafy sy fanoherana mivalona tena tsara.
2) Fahaizana pirinty tsara.
3) Azo ampifanarahina amin'ny fomba fanodinana ary azo ampiharina amin'ny fepetra takiana manokana amin'ny fonosana vokatra samihafa.
4) Fanaraha-maso kalitao henjana.
5) Serivisy namboarina ho an'ny takiana samihafa ho an'ny mpanjifa.
Nampiasaina be dia be tamin'ny fonosana, fanontana ary laminaty:
1) Fitaovana fonosana ho an'ny boaty kely, toy ny sakafo, divay, kilalao, zava-mahadomelina, boaty kiraro sy ny hafa.
2) Ampiasaina betsaka sy omena amin'ny faritra fanontana, pirinty loko tokana, avy eo manaova baoritra izay ampiasaina ho fonosana, na ampiasaina amin'ny famolavolana, vokatra tanana.
3) Ary azo ampiasaina ho toy ny marika, lovia ary ny paompy amin'ny fonosana blister.
1: fonosana mihodina
Nofonosina taratasy sosona kraft lin nopetahany 3 sosona PE.
2: fonosana amin'ny valizy lehibe
Sarimihetsika BOPP nofonosina, nopetahana tamin'ny takelaka hazo matanjaka, zoro 4 no arovan'ny tabilaon'ny carton.
3: fonosana namboarina ho an'ny mpanjifa.
4: TDS momba ny "NINGBO FOLD"
Afaka manome anao santionany maimaim-poana izahay pls mifandraisa amiko ary zarao amiko ny adiresy mazava / kaody post / olona / finday.
Fiheverana: ny haben'ny santionany dia toy ny taratasy A4 foana, raha mila fepetra manokana ianao dia ampahafantaro anay.
Teo aloha: Super C1S Fanding Box Board / GC1 ivory board / High Bulk in Roll and Sheet
Manaraka: OEM mifono C1S namboarina taratasy Art takelaka taratasy
Birao taratasy APP
Birao miendrika boaty
Taratasy Ivory Board
Ivory Board 250gsm